AKHRISO: Khudbaddii Uu Madaxweynaha JSL Ee Sannad Guuradda 28aad Ee 18 May Oo Ah Maalintii Qarankani La Soo Noqday Madax-Bannaanidiisa | Himilo Media Group
AKHRISO: Khudbaddii Uu Madaxweynaha JSL Ee Sannad Guuradda 28aad Ee 18 May Oo Ah Maalintii Qarankani La Soo Noqday Madax-Bannaanidiisa
Hargeysa, 19 May, 2019 (Himilo)-Xuska iyo dabbaaldega Sanadguurada 28aad ee ka soo wareegtay maalintii dib ula soo noqoshada madax bannaanida dalka Somaliland ayaa shalay si ballaadhan looga xusay guud ahaan dalka Somaliland, Gobol, Degmo iyo Tuulo ba.
Madaxweynaha JSL Mudane Muuse Biixi Cabdi oo xaflada Xuska 18ka may kaga qayb galay Caasimada Somaliland ee Hargeysa, ayaa dadweynaha u jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa, waxaanay u dhigneyd sidan:-
Madaxweynihii hore ee Somaliland, Shir-guddoonka labada Gole,Maxkamadda Sare, Golaha Wasiiradda, Guddoomiyaha Xisbiga UCID iyo Masuuliyiinta Axsaabta Qaranka, Madaxweyne Ku-xigeennadii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland, Wasiiradda ka socda Dawlad Deegaanka Soomaalida, Xildhibaannada ka socda dalalka Djibouti, Kenya iyo Uganda, Marti-sharafta ka kala yimid dalalka Ethiopia, UK, Denmark, Ururka Midowga Yurub (EU), Qaramada Midoobay (UN), Diblomaasiyiinta iyo Safiirada Dalalka Ethiopia, Djibouti iyo Turkey u fadhiga Somaliland, Mudanta iyo mudakarka Madashan Fadhiya iyo Shacab Weynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Dhammaantiin:
18-ka May waa maalin qadarin iyo maamus ku leh dhammaan shacabiga Somaliland. Waa maalin qof kasta oo muwaadin ah qalbigiisa ku xardhan. Nacabkuna uu ka naxo. Waa maalin uu colaadiyo cadowgeennu. Waa maalin shacbiga Somaliland muujiyey cududdiisa.
18-kii May 1991-kii, reer Somaliland waxa u baryey waa-san oo ku suntan erayadii Alla ha u Naxariistee, Cali Sugule ee ahaa “Waa baa baryey, billicsan, Maalin baxsan, kii ka baydhee, bahdii ka leexda, ee Boqonta gooya, Waa Baa’ba’iisa.”
Qaranka Somaliland waxa lagu hagaa hoggaamin talo-wadaag ah oo ka kooban Xisbiyo, Golayaal Sharci-dajineed, Garsoor iyo Xukuumad ku joogta tubta Dimuqraadiyadda. Xukuumad u darban adkeynta nabadda iyo xoojinta midnimada Somaliland iyo horumarinta maamul-wanaagga. Xukuumad la dareen ah shacbigeeda. Waa Qaran xilka hoggaaminta u saraysa isugu wareejiya hab doorasho xor iyo xalaal ah oo dhif iyo naadir ku ah Qaaradda Afrika iyo Adduunyada in badan oo ka mid ah.
Dhamaanteen waxaynu ka mideysan-nahay dhismaha dalkeenna, nabadda, midnimada iyo ilaalinta xorriyadeenna, waxaana innoo udub dhexaad ah 18-ka May, oo ah Maalintii guusha aynu gaadhnay ee aynu La Soo Noqonay Xorriyadda.
Dawladnimo waa awood shacab oo lagu aaminay fulinteeda Xukuumadda, si ay u horumariso adeeg bulsho oo hufan. Shacabka Somaliland waxa xannaaneeya oo cudur iyo caabuq ka ilaaliya bahda caafimaadka oo saq dhexe iyo subax ba u taagan daryeelka caafimaad ee muwaadinka. In kastoo sannadkii 2018-kii, dakhliga Xukuumaddu koobnaa, maadaama dhibaatooyinku badnaayeen, dhoofkii xooluhuna xayirnaa, haddana Xukuumaddu waa ay xoogga saartay oo ku dadaashay:
– Waxa la qaybiyey 1,200,000 (Hal Milyan Lix Boqol oo Kun oo Buug) oo la gaadhsiiyey ardayda tiro badan oo kala jooga gobolladadalka.
Dhallinyaradu waa xooggii maanta iyo hoggaamiyayaashii Qaranka ee mustaqbalka. In rajo iyo goobo shaqo loo abuuro waa mudnaanta koowaad ee xukuumaddeena, waana waajib shacbiga oo dhan saaran.
Xeerka doorashooyinka ee Xukuumaddu curisay una gudbiysay Golayaasha Baarlamaanka waxa loo qoondeeyay haweenka in 18 xubnood loo xidho oo ay si gaara ugu tartamaan.
Barnaamijka Shaqo Qaran 30% waxa loo qorsheeyey in gabdhuhu ay si gaar ah ugu tartamaan. Imtixaannada lagu galayay shaqada Dawladda waxa sannadkan la gaadhsiiyay Gobollada Dalka, waxaana 30% loo qoondeeyey in gabdhuhu ku soo galaan shaqada. Dhallinyarada la shaqo qaliyey waxay tiradoodu gaadhaysaa 1,654 (Kun, Lix Boqol Afar iyo Konton) Dhallinyaro ah. Intaa waxa dheer, 1,500 oo ah Barnaamijka Shaqo Qaran ah.
Qarankan waxa saldhig adag oo dhaqaale u abuura, horumar dhaqaale oo dhinacyo badan lehna gaadhsiiya bahda ganacsiga oo adeegsanaya Suuqa Xorta ah (Free Market), iyaga oo raacaya qorshaha Qaranka ee ay soo diyaariyeen Wasaaradaha wax-soo-saarka, Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda iyo Baanka Dhexe.
Xukuumaddu waxay qorshaynaysaa mustaqbalka sidii loogu diyaar garoobi lahaa magaalooyinka sii ballaadhanaya iyo tirada dadka ee sii kordhaysa, si loogu helo adeeg hufan. Xukuumaddu waxa ay dedaal xoogan ugu jirtaa sidii adeegga bulshada ee maanta kor loogu qaadi lahaa.
Dhulka sannadkii oo dhan la beeri karo ee Somaliland waxa lagu qiyaasaa Saddex Boqol iyo Konton Kun oo Hector, laakiin hadda waxaynu ka beeranaa 3%. Qaran ahaan himilladeenu waxa weeyi in sannadka 2022 la beero 15% ka mid ah dhulkeena beeraha ku habboon. Dhulkeena waa in loo beero hab casri ah, xoolaha noolna loo dhaqo hab casri, si loo kordhiyo wax-soo-saarka dalka.
18 May 2018-kii sicir-barrarku waxa uu ahaa 19.2%. 18-ka May 2019-ka, Sicir-bararka waxa hoos loogu soo dhigay 7.7%.
Halkaana waxa ka muuqata in Shillinka Somaliland uu xoogeystay oo uu qiimihiisu kor u kacay 24%. Taas oo keentay deganaansho dhaqaale. Waxa aynu rajaynaynaa in marka Xooluhu innoo furmaan dhawaan Idam Alle, in dhaqaalaheenu kor u sii koco, suuqa sarrifka lacaguhuna xasillooni ku nagaado.
– Waxa la bilaabay dhismaha iyo ballaadhinta Dekedda Berbera, si ay u noqoto Deked weyn oo casri ah oo la tartami karta Dekedaha kale ee Gobolka iyo Adduunka ba.
Ciidammada kala duwan ee Somaliland waa tiir-dhexaadka nabad-gelyada iyo amniga dhismaha Qarankeena curdinka, oo leh cadow badan. Xukuumaddu iyada oo taas aqoonsan waxay ku tallaabsatay:
Dhammaanteen, waxa aynu og-soonahay in Ciidammada Qaranku ku dhintaan iyaga oo nabadaynaya iska-hor imaadka beelaha iyo iyaga oo ka hor tagaya dambiilayaasha amniga khal-khalinaya. Intaa waxa u dheer iyaga oo ka difaaca dalka cadow si toos ah iyo si dadbanba u soo weerara.
Sida aad la socotaan, Qaranka Somaliland waxa uu ku dhismayaa doorashooyinka oo wakhtigoodii lagu qabto, Dib-u-dhaca doorashooyinku waa dhibaato siyaasadeed oo wiiqi karta geedi socodka dimuqraadiyada iyo midnimadeenna.
Labada doorasho ee isku sidkan ee sannadkan dabayaaqadiisa qorshaysan, Xisbiga KULMIYE iyo Xukuumaddiisu waxa ay fuliyeen dhammaan wixii kaga soo aaday miisaaniyad iyo xeer ba. Waxa kale oo ay aqbaleen dhammaanba soo-jeedintii Axsaabta Qaranka ee mucaaridka ah ee ay ka dalbadeen ee ahaa in Xisbiga Kulmiye iyo Xukuumadiisu ka tanaasulaan oo ay ka dhegaystaan oo aheyd, In la kordhiyo tirada Xubnaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo lagu daro laba xubnood mustaqbalka dhow, iyo in Komishanka Cusub qabto doorashooyinka, waxannu aqbalnay Komishanka cusub ee la dooranayo waqtigii la dooranayey lasoo hormariyo oo bisha Siddeedaad kowdeeda la bilaabo magacaabiddooda, waxanau aqbalnay in Komishanka cusubi uu qabto doorashooyinka marka kii hore waqtigoodii dhammaado, waxannu diyaar u nahay inaannu ka qayb qaadanno oo aannu weliba tanaasul badan u samaynno wax kasta oo suurtogal ah oo ay xisbiyada mucaaridku tabanayaan si ay doorashadu inoogu qabsoonto.
Waxaannu xoojinay Siyaasadda Arrimaha Dibedda ee ku jihaysan Qaarada Afrika. Waxaannu u aragnaa in baadi-goobka ictiraafka Somaliland xooggiisa la saaro dalalka Afrika iyo Golayaasha Afrika. Waxaan u caddaynayaa Afrika in Somaliland tahay dal ku dhisan xuduudihii gumeysiga, taas oo waafaqsan Axdiga iyo Sharciga u yaalla Ururka Midowga Afrika, buuxiyeyna dhammaan shuruudihii looga baahnaa in dal jiraa in uu yeesho.
Waxa muuqata in caalamka badankiisu garwaaqsaday in la joogo wakhtigii la kala guri lahaa Somaliland iyo Somaliya. Somalialand waxay go’aansatay siyaasadda ah in mushkiladda lagu xalliyo si nabad ah iyo wada- hadal. Mar walba waxaannu ka fogaanaynaa wixii keeni kara xasarad iyo colaado hor-leh.
Dadka maanta Muqdisho ka taliya waxa aannu leenahay intii aad Somaliland gaadhsiiseen dhibaato soddonkii sano ee aynnu midaysnayn waxa ka culus oo nagaga khasaare badan siddeed iyo labaatanka aynu kala maqnayn ee aad lahaydeen ma xoroobi karaan, ma ictiraafayno iyo waa qayb naga mid ah.
Somaliland waxay waayo-arag u tahay riiqda colaadaha. Sidaas darteed, Somaliland waxay door-bidaysaa in mushkillada Somaliland iyo Somaliya lagu xalliyo wada hadal macno leh oo lagu qabto fagaare caalami ah.
Dhawaan waxa aynnu maqalnay in la samaynayo ciidammada nabadgelyada badda Cas, waxan la yaabahannahay ragga Isteraatajiisteyaasha ah ee fikradda leh ee gobolka katirsan ee doonaya inay badda cas nabadgelyadeeda xoojiyaan ee Somaliland ah dalka xeebta ugu badan ee badda cas, Somaliland marka laga tixgelin waayey xaggee baa loo wadaa, mise Somaliland cid baa xoog kaga qaadaysa xuquuqdeeda.
Shacabka xarriirta ah ee Somaliland waxaan ugu baaqayaa in ay adkeystaan nabad-gelyadooda, midnimadooda iyo qaran-nimadooda, isla markaana, waa in ay u hilaadiyaan ubadkooda mustaqbal ifaya, caalamkana nabad-gelyo kula noolaadaan, cadowgoodana iska caabiyaan.